Maqaarkayga Wimpy ee MyJonesSoda.com | Martech Zone
Khamiis, Juun 8, 2006 Monday, August 24, 2009 Douglas Karr
Waan hubinayay http://www.myjonesmusic.com usbuucii la soo dhaafay waxayna arkeen inay adeegsanayeen Wimpy Flash-ka MP3 Player-ka ku saleysan. Kani waa isla ciyaaryahankii aan hadda uun u dhisay maqaar caado u ah websaydhka wiilkayga, http://www.billkarr.com. Marka waxaan ku tuuray dadweynihii waaweynaa ee Jones xariijin oo waxaan weydiiyay haddii aan u dhisi karo maqaar. Waan sameeyay, iyo 'voila', hadda waxay isticmaalayaan maqaarka boggooda.
Xitaa waxay ka fekerayaan inay furaan goobta si ay naqshado kale uga helaan taageerayaasha kale. Waxaan u maleynayaa inay taasi tahay fikrad fantastik ah.
Tani waa halka shirkadaha badankood ay lumiyaan barta internetka. Maxay maqaarka ugu dhiseysaa MP3 player-ka websaydhka Muusikada ee Soda inuu ku lug leeyahay iibinta soodhaha? WAX WALBA!!! Websaydhku waa habka aad ugu xirmi karto dhagaystayaashaada adoo adeegsanaya farriin habboon oo iyaga la hadlaysa. Shirkado aad u tiro badan ayaa sii wadaya inay u adeegsadaan shabakadda sida calaamadda garaashka garaashka dayrta hore.
Wixii Jones uu sameeyay markii ugu horreysay ee la dhigo goobta Muusigga waxay ka sii ballaadhiyeen astaantooda aniga iga badan wiilkayga, oo jecel muusikada (oo ku qoran liiska myjonesmusic.com). Iyo wiilkayga dhaafsiisan, dhammaan asxaabtiisa. Oo sidaas, iyo sidaas, iyo wixii la mid ah. Tani waa sumcad-yaqaan heer sare ah oo uu soo saaray Jones Soda. Mawduucana gabi ahaanba waan riixeynaa annaga, macaamiishooda aaminka ah.
Way dhisteen. Waan nimid. Waxaan sii wadeynaa inaan iibsanno!
PS: Xidid Beer-la’aanta Sonkorta ayaa ah kan aan ugu jeclahay.
Jun 9, 2008 at 2: 45 PM
Sideen ku dalban karaa laba iyo toban baako oo dhalooyin dhalashada wiilkayga (Ogast 21) oo sawirkiisu ku yaal